सुशासनयुक्त समाज निर्माण पहिलो लक्ष्य - Pradesh Today
Homeफिचरसुशासनयुक्त समाज निर्माण पहिलो लक्ष्य
सुशासनयुक्त समाज निर्माण पहिलो लक्ष्य
मंसिर १४ को चुनावी रौनक चलेको छ । दलहरू तथा उम्मेदवारहरू मत माग्न गाउँ–गाउँमा पुगेका छन् । मतदाता पनि दक्ष, सक्षम र योग्य उम्मेदवार छनौट गर्ने सोचमा छन् । दाङमा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को (ख) मा प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको छ । प्रदेश सभा सदस्यको लागि १४ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । चुनावमा होमिएका उम्मेदवारहरू सबैले आफूले जित्ने विश्वासका साथ मत मागिरहेका छन् । समाजवादी पार्टीले पनि प्रदेशसभा सदस्यको लागि डिल्लीबहादुर डाँगीलाई उठाएको छ । डाँगी आफ्नो पक्षमा मत पार्न घरदैलो अभियानमा व्यस्त रहेका छन् । आजको अंकमा हामीले समाजवादी पार्टीको तर्फबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका डाँगीसँग कुराकानी गरेका छौं ।
यहाँको उम्मेदवारी किन ?
देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, कालोबजारी, कमिशनलाई रोक्न र सुशासनयुक्त समाज निर्माण गरी समृद्धिको मार्गमा अघि लैजान मेरो उम्मेदवारी परेको हो । नागरिक अहिले पनि समान्य आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित रहनुपरेको छ । ति नागरिकलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न हामी आएका छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका सुविधा नागरिकले निशुल्क रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मैले समाजवादी पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएको हँु ।
मैले समाजवादी पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएपछि अहिले यहाँका अधिकांश नागरिक खुशी हुनुभएको छ । गाउँमा भोट माग्न पुग्दा नागरिकहरूले मप्रति देखाएको माया म व्यक्त गरिरहन सक्दिन । अहिलेसम्म नेपाली काँग्रेस र नेकपाका उम्मेदवारलाई जितायौँ तर केही पाएनौँ, अब हामीले विकल्प खोजिरहेका छौँ । विकल्पमा समाजवादी पार्टीले के गर्नसक्छ भन्ने नागरिकले विश्वास दिनुभएको छ । मैले नागरिकलाई पनि झुटा आश्वासन बाँडेको छैन्, जति सकिन्छ त्यति विकासका एजेण्डाहरू लगेको छु ।
नागरिकका गुनासोहरु के पाउनुभयो ?
नागरिक अहिले सरकारका कामप्रति निकै असन्तुष्ट देखिएका छन् । देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा रोकिन नसकेकोप्रति नागरिकमा वितृष्णा देखिएको छ । यसभन्दा पहिला नेकपा, काँग्रेस घरदैलोमा आएर हामीलाई थुप्रै आश्वासन बाँडे । घर नहुनेलाई घर बनाइदिन्छौँ, बाटो बनाईदिन्छौँ, पिउने पाउने दिन्छौँ भन्दै चुनावमा आश्वासन दिए ।
चुनावको समयमा हामी धेरै युवाहरूलाई मासु र चिउरा खुवाउँदै प्रचारप्रसार गरे । अहिले चुनाव जितेर गएपछि अहिलेसम्म कुनै पार्टीले पनि आफ्ना प्रतिवद्धता पूरा गरेका छैनन् । यसको विरूद्धमा अबको विकल्प नयाँ शक्तिको रूपमा समाजवादी पार्टी आएको छ । हामी यसलाई स्वागत गछौँ र हामी निस्वार्थ भएर अब आउँदै गरेको मंसिर १४ गतेको उपनिर्वाचनमा यस पार्टीलाई पहिलो पार्टीको रूपमा अगाडि ल्याउने छौँ भन्ने बचनवद्धता दिनुभएको छ ।
चुनावी एजेण्डेहरू के हुन तपाईका ?
भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न हामीहरूको मुख्य एजेण्डा हो । नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी निःशुल्क उपचार पाउनुपर्छ भन्ने एजेण्डा पनि अघि सारेका छौँ । अनि अहिले बढ्दै गएको बेरोजगारी समस्यालाई अन्त्य गर्न युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेका छौँ ।
त्यसैगरी वातावरण सन्तुलनका लागि हरित क्षेत्रको अवधारण अघि बढाउने, सुकुम्बासी समस्या समाधान गरी व्यवस्थित बसोबास, जातीय वर्ग समुदायका राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, सामुदायिक अधिकार पहिचान एवं सम्मानका लागि पहल गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकारका लागि सधैँ सबैलाई सम्मान हुने किसिमको नीति निर्माण गर्ने र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने हाम्रा एजेण्डा हुन् ।
कार्यान्वयन हुने आधारहरू थुप्रै छन् । हामीले रेल र सुनभन्दा पनि नागरिकलाई नुनको आवश्यकता छ भन्ने बुझेका छौँ । ठूला–ठूला सपना बाँडेका छैनौँ । देशको अर्थपुँजीले धान्न सक्ने विकासका योजना अघि सारेका छौँ ।
अनि युवालाई स्देशमै रोक्नका लागि युवा स्वरोजगारका योजनालाई प्राथमिकतामा पारेका छौँ । यि कुरा भनेको भनेको असम्भव भन्ने केही छैन् । नागरिकलाई हामीले चुनाव अघि पनि विभिन्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेका छौँ । यसले पनि नागरिकलाई थप विश्वस्त बढाएको छ ।
त्यो त मैले कति गरेको छु भन्ने त आम नागरिकले विश्लेषण गर्नुहुन्छ । म जब २०६६ देखि हेभी इक्कुपमेन्ट व्यवसायमा संलग्न भई गाउँ–गाउँमा टोल टोलमा गएर जनतासँग हातेमालो गर्दै विभिन्न किसिमका विकास निर्माणका काममा सहयोग गरे । त्यति बेलादेखि नै नागरिकले मप्रति विश्वास गर्न थाल्नुभएको छ । मैले जनताका हरेक सुख, दुःखमा हेर्ने गरेको छु ।
मैले सबै कुरा भनेर अहिले सक्दिन होला । मैले कसैलाई केही आपतविपद् आइपर्दा राहतस्वरूप उसलाई सहयोेग गर्दै आएको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपाल हेभि इक्युप्मेन्ट व्यवसायी महासंघको सदस्य रही नेपालभरी छरिएर रहेका अपरेटरहरूको लागि लाइन्सेन्सको लागि निरन्तर राज्यसँग लड्दै २०७६ सम्म पनि लागिरहेको छु ।
जनताले कस्ता विकास मागेका छन् ?
जनताले अहिले खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका कुरालाई निःशुल्क ग्यारेण्टीको माग गर्नुभएको छ । आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकेमात्र ठूला आवश्यकता पूरा गर्न लाग्नुपर्छ भन्ने जनताको माग छ । ति कुराको आवश्यकता पूर्ति हुन नसक्दा नागरिकहरू अभावमा छन् । जनताको माग भनेको आधारभूत आवश्यकता हो ।
नीति परिवर्तन भयो, व्यवस्था परिवर्तन भयो तर हामीहरूको जीवनशैली फेरिन सकेको छैन भने नागरिकको गुनासो छ । नागरिकले सामान्यभन्दा सामान्य आधारभूत आवश्यकता पूर्तिको माग गर्नुभएको छ । ति उहाँहरूले मागेका माग सम्बोधन गर्नेछौँ । बिगतमा अरू नेतृत्वले गरेको गाउँलाई भुल्नुभयो तर हामीले त्यसो गर्ने छैनौँ ।
मतदातालाई के भन्नहुन्छ ?
म मेरा सम्पूर्ण शुभेच्छुक तथा मतदताहरूलाई चुनाव चिन्ह हातमा मतदान गरी विजयी बनाउन आग्रह गर्दछु । म सँधै तपाईहरूको साथमा विकास निर्माणसँगै हरेक सुख, दुःखमा छु । आम मतदाताले मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने पूर्णविश्वास लिएको छ । स्वच्छ हृदयबाट विकल्पमा समाजवादी पार्टीको उम्मेदवार म डिल्लीबहादुर डाँगीलाई छनौट गरी भोट दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएका छौँ ।
म सधैँ गाउँको विकासमा जोडिरहेको छु, जोडिने छु भन्ने पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । म कुराभन्दा काममा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ । हरेक विषयमा नागरिकको खबरदारी हुन आवश्यक छ । मलाई मात्र होइन्, नेतृत्वमा पुगेर पनि काम नगर्ने प्रतिनिधिलाई बेला–बेलामा खबरदारी गर्नुहोला, धन्यवाद ।